Shaki weyn ayaa laga muujinayaa in fasal ciyaareedka bilaaban doona horyaalka La Liga laga isticmaali doono aaladda VAR. – Gool FM
(Madrid) 21 Luulyo 2019. Maamulada horyaalada heerka koowaad iyo kan labaad ee La Liga ayaa shaki galinaya in fasalka ciyaareedka bilaaban doona kulamada horyaalka loo adeegsan doono aaladda garsoorka caawisa ee VAR sababo la xiriira qalab cusub oo la qorsheynayay in la hirgaliyo.
Bishii May ayey aheyd markii xiriirka kubadda cagta Spain ay go’aansadeen iney isaga guuraan qalabka ay soo saarto shirkadda Mediapro iyagoo ku dhawaaqay ney u guuri doonaan qalabka cusub ee shirkadda Hawk-Eye Innovations Limited.
Qalabka cusub ee ay doonayaan iney ku shaqeeyaan waxaa horay loogu arkay koobkii Adduunka 2018, tartanka UEFA Champions League iyo sidoo kale qaar ka mid ah horyaalada qaaradda yurub.
Si kastaba, Roberto Gomez ayaa ka digay isagoo fadhiya Radio MARCA iney jiraan wax walwal ah oo ku saabsan hadii uu qalabka diyaar noqonayo fasalka cusub iyo hadii kale.
Waxaa xusid mudan in bilowga La Liga fasal ciyaareedka cusub 2019/2020 loo asteeyay 16-ka August.